Ny Surface Book i7 dia taranaka faharoa amin'ny Surface Book | Vaovao momba ny gadget
Tamin'ny fihaonambe izay nanoloran'i Microsoft ireo fitaovana vaovao izay hamely ny tsena atsy ho atsy, ny tovolahy avy ao Redmond, ho fanampin'ny AOI Surface Studio mahatalanjona, dia nanolotra ny taranaka faharoa an'ny Surface Book, izay nanampian'izy ireo ny tag i7 . Raha ny lojika dia antony manosika ity tagline ity hanavahana azy amin'ny maodely teo aloha Hatramin'ny ao anatiny dia ahitantsika ny processeur an'ny Intel's Core i7 Skylake, izay raha ny filazan'ny mpanamboatra azy dia manome antsika hery matanjaka mihoatra ny tamin'ny taon-dasa, maodely izay tsy tonga tany Espana na tany amin'ny firenen-kafa maro.
Ny efijery amin'ity taranaka faharoa an'ny Ny Surface Book dia manome vahaolana 3.000 x 2.000 ho antsika, mitovy amin'ny maodelin'ny taranaka voalohany. Ny endriny dia mitovy ihany raha tsy ao anatiny izay tsy maintsy anampiana mpankafy faharoa hanatsarana ny fampangatsiahana ny processeur, indrindra rehefa manao asa fanovana izahay.
Ny fiainana bateria dia nihatsara koa ny Surface Book i7 dia afaka miasa tsy misy famerenana mandritra ny 16 ora. Ity Surface Book vaovao ity dia hamely ny tsena amin'ny volana novambra manomboka amin'ny $ 2.400. Na dia marina aza fa afaka mandositra am-paosy maro izy, dia tsy maintsy entina ao an-tsaina fa takelaka finday ihany koa ity solosaina finday ity, izay manome antsika fahaiza-manao betsaka kokoa, indrindra raha toa ka ilaina amin'ny hery sy ny fivezivezena isan'andro ny filantsika.
Microsoft dia tsy nanolotra fampahalalana momba ireo safidy fikirana samihafa izay hanolotra antsika ny taranaka faharoa amin'ny Surface Book, maodely iray izay tsy nisy mihitsy tany Espana na Amerika Latina, mba hahafantarantsika ny momba ny fahaiza-mitahiry na ny habetsaky RAM izay hitantanana ireo fitaovana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny Surface Book i7 dia taranaka faharoa amin'ny Surface Book
Windows Holographic VR, dia solomaso tena zava-misy i Microsoft